အော်စကာဆု ဆန်ခါတင် စာရင်း
၁၄ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၀
၉၂ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန် အော်စကာဆု အတွက် ဆန်ခါတင် စာရင်းတွေ တနလာင်္နေ့က ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာတော့ ဒါရိုက်တာ Todd Philils ရဲ့ Joker ရုပ်ရှင်က အော်စကာ ဆန်ခါတင်ဆု ၁၁ ခုနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပြေးနေပါတယ်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ထုတ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ အော်စကာ ဆန်ခါတင်စာရင်းကိုတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Issa Rae နဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား John Cho တို့က Los Angeles မှာ ကြေညာခဲ့တာပါ။
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဆု အတွက် ရုပ်ရှင် ၉ ကား ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အထဲမှာ Joker လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တခြား ကားတွေကတော့ "Ford v Ferrari," "The Irishman," "Jojo Rabbit," "Little Women," "Marriage Story," "1917," "Once UponaTime ... in Hollywood" နဲ့ "Parasite." တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် ဆန်ခါတင် စာရင်းထဲမှာတော့ Harriet ကားထဲက မင်းသမီး Cynthia Erivo ၊ Marriage Story မှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ Scarlett Johansson ၊ Little Women မှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ Saoirse Ronan ၊ Bombshell ဇာတ်ကားက သရုပ်ဆောင် Charlize Theron၊ Judy ကားရဲ့ သရုပ်ဆောင် Renée Zellweger တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်စု ဆန်ခါတင် စာရင်းမှာတော့ Antonio Banderas က "Pain and Glory" ဇာတ်ကား၊ Leonardo DiCaprio က "Once UponaTime...in Hollywood ဇာတ်ကား၊ နောက် Adam Driver က "Marriage Story ဇာတ်ကား၊ Joaquin Phoenix က "Joker"ဇာတ်ကား နဲ့ Jonathan Pryce က "The Two Popes ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။
"The Irishman," "Once UponaTime... in Hollywood" နဲ့ "1917" တို့က အော်စကာ ဆန်ခါတင် ၁၀ ဆုဆီနဲ့ Joker ရုပ်ရှင်ကားကြီးနောက်က လိုက်နေပါတယ်။ အော်စကာ ဆုပေးပွဲကတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့ Los Angeles က Dolby Theater မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အျောစကာဆု ဆနျခါတငျ စာရငျး
၉၂ ကွိမျမွောကျ အမရေိကနျ အျောစကာဆု အတှကျ ဆနျခါတငျ စာရငျးတှေ တနလာင်္နကေ့ ထှကျပျေါလာခြိနျမှာတော့ ဒါရိုကျတာ Todd Philils ရဲ့ Joker ရုပျရှငျက အျောစကာ ဆနျခါတငျဆု ၁၁ ခုနဲ့ ထိပျဆုံးက ပွေးနပေါတယျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ အတှငျး ထုတျခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျကားတှထေဲက အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ကွတယျဆိုတဲ့ အျောစကာ ဆနျခါတငျစာရငျးကိုတော့ ရုပျရှငျမငျးသမီး Issa Rae နဲ့ ရုပျရှငျမငျးသား John Cho တို့က Los Angeles မှာ ကွညောခဲ့တာပါ။
အကောငျးဆုံး ရုပျရှငျဆု အတှကျ ရုပျရှငျ ၉ ကား ရှေးခယျြခံရတဲ့ အထဲမှာ Joker လညျး ပါဝငျပါတယျ။ တခွား ကားတှကေတော့ "Ford v Ferrari," "The Irishman," "Jojo Rabbit," "Little Women," "Marriage Story," "1917," "Once UponaTime ... in Hollywood" နဲ့ "Parasite." တို့ ဖွဈပါတယျ။
အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီး သရုပျဆောငျ ဆနျခါတငျ စာရငျးထဲမှာတော့ Harriet ကားထဲက မငျးသမီး Cynthia Erivo ၊ Marriage Story မှာ သရုပျဆောငျတဲ့ Scarlett Johansson ၊ Little Women မှာ သရုပျဆောငျတဲ့ Saoirse Ronan ၊ Bombshell ဇာတျကားက သရုပျဆောငျ Charlize Theron၊ Judy ကားရဲ့ သရုပျဆောငျ Renée Zellweger တို့ ဖွဈပါတယျ။
အကောငျးဆုံး အမြိုးသား သရုပျဆောငျစု ဆနျခါတငျ စာရငျးမှာတော့ Antonio Banderas က "Pain and Glory" ဇာတျကား၊ Leonardo DiCaprio က "Once UponaTime...in Hollywood ဇာတျကား၊ နောကျ Adam Driver က "Marriage Story ဇာတျကား၊ Joaquin Phoenix က "Joker"ဇာတျကား နဲ့ Jonathan Pryce က "The Two Popes ဇာတျကားတှနေဲ့ ရှေးခယျြခံရပါတယျ။
"The Irishman," "Once UponaTime... in Hollywood" နဲ့ "1917" တို့က အျောစကာ ဆနျခါတငျ ၁၀ ဆုဆီနဲ့ Joker ရုပျရှငျကားကွီးနောကျက လိုကျနပေါတယျ။ အျောစကာ ဆုပေးပှဲကတော့ လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ ၉ ရကျနေ့ Los Angeles က Dolby Theater မှာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် လောကကို ခြေချနေတဲ့ ကိုအေဒရီယံဇော်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ
Oscar ဆုရ ဟာသသရုပ်ဆောင် Robin Williams (၆၃) နှစ် ကွယ်လွန်
အကောင်းဆုံး အော်စကာ ဇာတ်ကားဆု Spotlight ရရှိ
အော်စကာဆု ရွေးချယ်မှု နိုင်ငံရေး ပါသလား
နိုင်ငံရေးရောယှက်မှု များလာမည့် ၂၀၁၇ အော်စကာ
မနီလာမြို့ ကာစီနို သေနတ်သမား တိုက်ခိုက်မှု ၃၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး